Apple dia namoaka ny fanavaozana voalohany ny iOS 10, iOS 10.0.2 | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka ny fanavaozana voalohany ny iOS 10, iOS 10.0.2
24 ora lasa izay taorian'ny nanombohan'ny Apple nametraka ireo mpampiasa ny programa beta ho an'ny daholobe, 24 ora taorian'ny nandefasana ny beta voalohany tamin'ny fanavaozana lehibe voalohany izay ho tonga alohan'ny faran'ny taona: 10.1. Fa mandra-pahatongan'ny fanavaozana izany, izay hanoloran'i Apple ny kinova farany an'ny safidy vaovao manjavozavo ny fiaviana amin'ny alàlan'ny fakantsary iPhone 7 Plus, Ny orinasan-tserasera Cupertino dia tsy maintsy mandefa fanavaozana kely hamahana ireo olana atolotry ny mpampiasa sasany. Ilay voalohany navoakan'i Apple, iOS 10.0.2 dia mamaha ny olan'ny fanaraha-maso ny playback an'ny EarPod vaovao miaraka amin'ny fifandraisana misy tselatra.
Olana iray hafa izay nolazain'ny mpampiasa sasany fa mijaly koa dia misy ifandraisany amin'ny Photos, izay hikatona ho azy rehefa mampandeha ny tranomboky iCloud. Mikasika ny olan'ny buzzing efa naseho tamin'ny alàlan'ny mpampiasa marobe amin'ny iPhone 7 Plus, Mbola tsy niteny i Apple. Ity beta ity koa dia tsy mamaha io olana kely io izay manomboka mahasosotra ho an'ny mpampiasa sasany.
Ity fanavaozana voalohany ity zara raha hipetraka 56 MB amin'ny fitaovantsika ary azontsika atao ny misintona azy mivantana avy amin'ny fitaovantsika nefa tsy mila mampiasa iTunes, na dia tsy manana terminal mandritra ny minitra vitsy aza isika rehefa manomboka indray ary mametraka ity fanavaozana ity.
Apple koa dia nanararaotra Amboary ny bibikely ary manatsara ny fahamarinan'ny iOS 10 amin'ny fitaovana rehetra. Raha tsiahivina dia mbola misy ireo mpampiasa manohy manontany hoe iza amin'ireo terminal no tavela tamin'ity fanavaozana ity. Ireto terminal ireto dia ny iPhone 4s, iPad 2 ary 3, ny iPad Mini andiany voalohany ary ny iPod touch amin'ny taranaka faha-5. Ho an'ireo mpampiasa ireo, ny fanavaozana farany misy dia ny iOS 9.3.5, izay nametraka olana ara-piarovana lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 10 » Apple dia namoaka ny fanavaozana voalohany ny iOS 10, iOS 10.0.2
Ary isan-taona dia mitovy. IOS vaovao sy kinova xo1 isan-kerinandro sy kinova x.1 isam-bolana, total izay amin'ny tapaky ny taona dia mivoaka ny x.4 ary toy izany mandra-pivoakan'ny x ambony ambony.
Ary isan-taona dia mitovy, izay tsara, iza no tsara indrindra, izao eny ary pumbaa !! Ny fitarainana, ny WiFi tsy mandeha, ny sary, ny fomba fiaramanidina tsy mandeha ary lava sns.
Izy ireo dia dejavu feno rivotra. Ary ny zavatra ratsy indrindra dia ny manaikitra hatrany ny vato isan-taona.
Ny dokotera dia hoy izy:
Jereo, manaiky tanteraka aho.
Valiny amin'ny The Doctor
Luis J. Lebrón dia hoy izy:
Tsy ho azoko mihitsy ny tsikera momba ny fanatsarana… Heveriko fa ios10 dia famoahana mahafinaritra ny rafitra fiasa. Ho ahy, raha manadio sy manatsara azy izy ireo isan-kerinandro dia lavorary.
Valiny tamin'i Luis J. Lebrón
Voalazanao izany satria tsy nandramanao ny fomba fihazakazaky ny iOS 7 amin'ny iPhone 5S. Na ny iOS 6 amin'ny iPhone 5….  dia tsy manao ny fankasitrahana ny famelana ny iOS hapetraka amin'ny terminal taloha, tsy 'favoris' izany. Miloka izany. Raha nanome ny safidy fotsiny izy ireo ary nanao sonia ireo kinova taloha ... hampiato ny famakianay ny fahombiazan'ny kinova iOS (izay mila vanim-potoana 1 taona handefasana).
Fa maninona aho no miteny an'izany? Izaho dia manana iPhone 3GS iPhone 4, iPhone 5S, iPhone 6S ary amin'izao fotoana izao dia mamaly anao amin'ny iPhone 7. Eny, ny iPhone 6S amin'ny iOS 9.3.5 (kinova farany nohosorana rehefa afaka herintaona) dia manana lesoka 0 raha ampitahaina amin'ny Fahadisoana sary mihetsika 300 izay omen'ny iPhone 7 ao amin'ny iOS 10.0.2 (amin'ny zavatra kely toy ny fanokafana multitasking).
Fa ny olana dia tsy ny zava-mitranga amin'ny iPhone 7 izao. Averina isan-taona izany. Miaraka amin'ny iOS 7, amin'ny iOS 8, amin'ny iOS 9, amin'ny iOS 10….
Ary mbola manohy mividy amin'ny  izahay
Lujahehi dia hoy izy:
Nanana iphone 5, 5s ary 6s aho.
Ilay 5 miaraka amin'ny ios 6, tonga lafatra tsotra izao, ny fahatsiarovana tsara indrindra tazomiko, ny 5s miaraka amin'ny ios 7 dia nihazakazaka be dia be koa, angamba niaraka tamin'ny bibikely, saingy tena tsara, saingy tsy nampino ahy tamin'ny iOS 6 mihitsy ireo 9, na dia tamin'ny 9.3.5 Nanana fotoana izy fa nisy zavatra nifindra tamina vato mahatafintohina, mitovy ihany ny vadiko, tsy ahy izany, naveriko, nohavaozina ary notsapaiko ny beta rehetra an'ny iOS 9 .. ny iOS 10 dia toa tsara kokoa amin'ny iphone 6s noho ny iOS 9, I eritrereto hoe izao no voalohany tamin'ny tantara no nitrangan'izany tao amin'ny terminal iray tao amin'ny terminal iray taloha kokoa noho ilay vaovao… .fa efa nanandrana tamin'ny IP 6 roa aho ary nahita horonan-tsary marobe ary tsy isalasalana.
Valio i Lujahehi
Avy amin'izay nampidinina ny piraofilina
Meifer dia hoy izy:
Salama, hatramin'ny nivoahako farany fa nanana olana tamin'ny antso Bluetooth aho, mihantona amiko io ary mila manao restart an-tery aho, efa nitranga tamin'ny olon-kafa ve izany? Hodinihiko amin'ny alàlan'ny fametrahana ny sonia feno hahitana raha voavaha io raha tsy hiverina amin'ny kinova taloha aho, misaotra
Valio i Meifer
James Corden dia kintana amin'ny doka Apple Music farany teo akaikin'i Cue, Iovine ary Bozoma
Apple dia nahazo an'i Tuplejump, orinasa iray mianatra sy manampahaizana artifisialy